Tag: iibka daruuraha suuq geynta iibka | Martech Zone
Tag: iibka daruuraha suuq geynta
5 Qalab oo Ka Caawin Doona Suuqgeyntaada Inta Lagu Jiro Ciidaha
Isniin, Oktoobar 3, 2016 John Theis
Xilliga dukaameysiga Kirismaska ​​waa mid ka mid ah xilliyada ugu muhiimsan ee sannadka ee dukaamada iyo suuqleyda, iyo ololayaasha suuqgeyntaadu waxay u baahan yihiin inay ka tarjumaan muhiimaddaas. Haysashada olole wax ku ool ah ayaa hubin doonta in sumaddaadu ay hesho dareenka ay mudan tahay inta lagu jiro xilliga ugu faa'iidada badan ee sanadka. Adduunyada maanta qori caaradiis dambe uma goyn doono markii aad isku dayeyso inaad macaamiishaada la xiriirto. Noocyadu waa inay habeeyaan dadaalkooda suuq-geynta si ay ula kulmaan qofka
Safarka Macaamiisha iyo Isukeenista Optimove
Jimcaha, Agoosto 26, 2016 Jimcaha, Agoosto 26, 2016 Douglas Karr
Mid ka mid ah xiisaha, teknoolojiyada horumarsan ee aan ku arkay IRCE wuxuu ahaa Optimove. Optimove waa softiweer ku saleysan websaydh ay u adeegsadaan suuqleyda macaamiisha iyo khabiirada haynta si ay ugu kobciyaan ganacsigooda khadka tooska ah macaamiishooda hadda jira. Barnaamijku wuxuu isku daraa farshaxanka suuqgeynta iyo sayniska xogta si uu uga caawiyo shirkadaha inay kordhiyaan kaqeybgalka macaamiisha iyo qiimaha nolosha oo dhan iyagoo si otomaatig ah u suuq geynaya waligood shaqsiyadeed oo wax ku ool ah. Wax soo saarka isku darka gaarka ah ee teknoolojiyada waxaa ka mid ah tusaalooyinka macaamiisha ee horumarsan, falanqaynta macaamiisha saadaalinta, bartilmaameedka macmiilka ee sareeya,
Tirakoobka Suuqgeynta 2014 ee Suuqgeynta Suuqgeynta Cloud
Talaado, Disembar 23, 2014 Isniin, Disembar 29, 2014 Douglas Karr
Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee soo baxaya 2014 ay tahay in shirkaduhu ay bilaabeen inay eegaan waxyaabo badan oo ku saabsan safarka macaamiisha. Sidee alaabadaada looga ogaadaa internetka? Sideed u hogaamineysaa rajada laga soo bilaabo daahfurka illaa iyo beddelaad? Iyo xitaa ka sii muhiimsan, maxaad sameyneysaa si aad u hubiso inaad sii wado oo aad u dhisto xiriiro aad u qiimo badan macaamiishaada? Salesforce Marketing Cloud waxay ogaatay in 86% suuqleyda heerka sare ay isku raacsan yihiin haysashada a